Tugharia uche taa na oyiyi nke igwe a: ulo nke Nna Anyị | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Na-atụgharị uche taa ta n’elu igwe a: n’elu ụlọ nke Nna anyị
di Paolo Tescione - Maggio 7, 2020
“N'ụlọ nna m ọtụtụ ebe obibi. Ọ bụrụ na ọ bụghị ebe ahụ, m gaara agwa gị na m ga-akwadebere gị ebe? Ọ bụrụkwa na m na-aga ịkwadebere gị ebe, m ga-abịa ọzọ kpọrọ gị bịa na nke m, yabụ, ebe ị nọ. "Jọn 14: 2-3
Site n’oge ruo n’oge ọ dị mkpa na anyị na-elekwasị anya n’ebube dị ebube nke Eluigwe! Eluigwe dị adị, ma Chukwu kwado, otu ụbọchi anyị niile ga-adị n’otu ebe anyị na Chukwu nke atọ n’ime otu. Ọ bụrụ n’anyị ghọtara Eluigwe nke ọma, anyị ga-eji ịhụnanya miri emi ma dị omimi chọọ ya ka ọ bụrụ agụụ siri ike, jupụta na udo na ọ joyụ oge ọbụla anyị chere maka ya.
Otú ọ dị, ọ dị nwute, echiche nke ịhapụ ụwa ma zute Onye Okike anyị bụ echiche na-atụ ụjọ nye ụfọdụ. Ikekwe ọ bụ ụjọ nke ihe amaghi ama, ihe ọmụma na anyị ga-ahapụ ndị anyị hụrụ n’anya n’azụ, ma ọ bụ ikekwe ụjọ na eluigwe agaghị abụ ebe izu ike ikpeazụ anyị.
Dịka Ndị Kraịst, ọ dị mkpa ka anyị gbalịsie ike ịkwalite nnukwu ịhụnanya maka Paradaịs site n'inweta nghọta ziri ezi ọ bụghị naanị nke Eluigwe n'onwe ya, kamakwa ebumnuche nke ndụ anyị na .wa. Eluigwe na-enyere anyị aka ịdị na-ebi ndụ anyị ma na-enyere anyị aka ịnọrọ n'ụzọ nke na-eduga n'inweta obi ụtọ ebighi ebi a.
N’ebe a dị n’elu, enyere anyị onyinye na-akasi obi n’eluigwe. O bu onyonyo nke “ulo nna”. Ihe oyiyi a dị mma iche banyere n'ihi na ọ na-ekpughe na Eluigwe bụ ebe obibi anyị. Ebe obibi bụ ebe dị nchebe. Ọ bụ ebe anyị nwere ike ịnọ n’onwe anyị, zuru ike, soro ndị anyị hụrụ n’anya wee nwee mmetụta nke anyị. Anyị bụ ụmụ ndị nwoke na ndị nwanyị nke Chineke ma kpebie ịbụ nke Ya.
Tụgharị uche na oyiyi a nke Eluigwe kwesịkwara ịkasi ndị onye ha hụrụ n'anya nwụnahụrụ. Ahụmịhe ị sị goodbye, maka ugbu a, siri ike nke ukwuu. Ma ọ kwesịrị isi ike. Ihe isi ike onye onye ị hụrụ n'anya nwụnahụrụ na-egosi na e nwere ezigbo ịhụnanya ná mmekọrịta ahụ. Nke ahụ dịkwa mma. Ma Chineke chọkwara ka mmetụta nke mfu jikọta na ọ joyụ ka anyị na-atụgharị uche n'eziokwu nke onye anyị hụrụ n'anya ka anyị na Nna ahụ nọrọ n'ụlọ ya ruo mgbe ebighị ebi. Ha nwere obi ụtọ n’ebe ahụ karịa ka anyị tụrụ anya ya, otu ụbọchị a ga-akpọ anyị ka anyị kere òkè n’ọ joyụ ahụ.
Na-atụgharị uche taa na onyonyo a nke eluigwe: ụlọ Nna anyị. Nọdụ ala na ihe oyiyi ahụ ma ka Chineke gwa gị okwu. Ka ị na-eme nke a, kwee ka obi gị gaa n’eluigwe ka ọchịchọ a nyere gị aka duzie omume gị ebe a ugbu a.
Dinwenụ a chọsiri m ike ịnọnyere gị na Paradaịs ruo mgbe ebighi ebi. Achọrọ m ka nkasi obi, kasie m obi ma jupụta n’ọ fullụ n’ụlọ gị. Nyere m aka idebe ihe a dịka ebumnuche na ndụ na itolite, ụbọchị ọbụla na agụụ maka izu ike ikpeazụ a. Jesus m kwere na gị.
Chineke na-enyere aka imeri ụjọ ma ọ bụ ụjọ ndị ọzọ
Akaebe Chọpụta ihe Mmụọ Nsọ na-ekwu
Sense nke ikpe ọmụma: gịnị bụ ya na otu esi tufuo ya?
Na-atụgharị uche taa: ọgụ nke ajọ onye ahụ
Na-atụgharị uche taa: ịdị ukwuu nke St. Joseph
Okpukpe: gịnị bụ ya na otu esi amata ya?
Na-atụgharị uche Taa: Nchịkọta nke Ozi Ọma dum